‘नमूना’ प्रदेश बनाउने सपनामा मुख्यमन्त्री शाही, ‘पाँच वर्षभित्र जनताका अपेक्षा पूरा गर्छौं’
युद्धमा ज्यान मार्नु र ध्वस्त गर्नु नै सफलता थियोः संसदीय व्यवस्थामा सबै कुराको ख्याल राख्नुपर्छ, गाह्रो हुन्छः मुख्यमन्त्री शाही
निर्माण सञ्चार, जुम्ला । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने वाचासहित मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक बनेको हो । कुनै बेला दूरदराज कर्णाली संघीयताको यात्रासँगै मुलुकको केन्द्र मानिने काठमाडौंसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिरहेजस्तो पनि देखिन्छ ।
कर्णाली हरेक कदममा आफूलाई अब्बल देखाउन चाहन्छ भन्ने कुराको उदाहरण थियो प्रदेशको नामकरण र प्रदेशको राजधानीलाई बिना विवाद निर्णय गर्न सक्नु । जबकि बाँकी ६ वटा प्रदेशले यो तहको उचाइमा आफूलाई लैजान सकेका छैनन् ।
यतिबेला विकास, अवसर र वितरणका हिसाबले पिछडिएको कर्णालीलाई ‘नमूना’ कर्णाली बनाउने यात्राका नायक बन्ने कोसिसमा छन् ६ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही ।
सात प्रदेश र तीन तहको सरकार बनेको मुलुकको केन्द्र सरकारले शाही जस्तै महत्त्वाकांक्षा बोकेका मुख्यमन्त्री मार्फत् जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्छ या सक्तैन, तर मुख्यमन्त्री शाही भने आउने ५ वर्षभित्र जनताका न्यूनतम आकांक्षा पूरा गर्ने कसम खान तयार छन् ।
सबैभन्दा गरिब प्रदेशको सूचीमा रहेको भनिएको कर्णालीको मुहार फेर्ने सपना बोकेर डेढ महिना अघि यहाँको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका शाहीको यतिबेला परीक्षा पनि जनताले लिइरहेका छन् ।
कुनै बेला ‘जनमुक्ति सेनाको कमान्डर’को इतिहास रचेका पूर्वऊर्जामन्त्री शाही यो प्रदेशको प्रमुख बनेसँगै केही नयाँ सुरुआत भएको जनताले अनुभूति पनि गरेको सन्देश पनि सञ्चार भएको छ ।
‘समृद्धिका लागि स्थिर सरकार’को नारा दिएका वाम गठबन्धन मार्फत् मुख्यमन्त्री बनेको शाहीलाई कर्णालीको मुहार फेर्न सोचेजस्तो सजिलो चाहिँ छैन ।
स्रोत साधनदेखि त्यसको सही वितरण, परिचालन र विकासका हरेक योजनाले दिनहुँ परिणाम दिने गरी उनी कसरी अघि बढ्लान्, यतिबेला जनताले उनीलाई नै हेरिरहेका छन् ।
प्रस्तुत छ, कर्णालीलाई ‘नमूना’ बनाउने आधारदेखि उनको भिजन र योजनामा केन्द्रित भई निर्माण सञ्चार डट कमका लागि ६ नम्बर प्रदेश संवाददाता सागर परियारले गरेको छलफलको सारांशः
प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी पाउँदा कस्तो लागेको छ ?
एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । सानैदेखि विद्रोही स्वभावको थिएँ । त्यही कारण युद्धमा होमिए । युद्धमा होमिँदा सांसद वा मन्त्री बनुँला भन्ने कल्पनासम्म गरेको थिइनँ ।
मन्त्री बन्न युद्धमा घरपरिवार त्यागेर सहभागी भएको पनि थिइनँ । ज्यानको बाजी लगाएर सशस्त्र युद्धमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरें । आज त्यसैको परिणामस्वरूप मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा प्रदेश ६ आफैंमा अभाव र गरिबीले थिचिएको छ । यहाँको समृद्धिको यात्रामा हामी सहभागी छौं । त्यो यात्राको नेतृत्व गर्ने चालकको रूपमा मैले आफूलाई लिएको छु । चुनौतीहरू पन्छाउँदै अवसरको खोजी गर्ने एउटा अवसर प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश समृद्धिका लागि तपाईंसँग कस्ता योजनाहरू छन् ?
यो प्रदेश हालसम्म केन्द्र सरकारबाट पछाडि पारिएको अवस्थामा छ । अहिले पनि हाम्रो प्रदेशका आधाभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनी छन् ।
हुम्ला र डोल्पामा सडक सञ्जाल नै पुग्न सकेको छैन । यहाँका जनताले पेटभरि खान पाउने अवस्था छैन । उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
यस्तो अवस्थामा यो प्रदेशको समृद्धिका लागि हामीले विशेष गुरुयोजना (आधारपत्र) बनाउँदै छौं । केही दिनभित्रै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको कार्यदल बनाएर अनुसन्धानमा खटाउँदै छौं ।
उहाँहरूले प्रदेश सरकारलाई त्यसको प्रतिवेदन बुझाउनुहुनेछ । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आफ्ना कार्यक्रम तथा नीतिहरू बनाउने छ । सडक र बिजुलीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय लगानी भित्राउन आवश्यक वातावरण निर्माण हुनेछ । प्रदेशको पहिलो समृद्धिको आधार पर्यटन हो । यसका लागि हामीले आउँदो वर्षलाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरिसकेका छौं ।
युद्ध र संसदीय मोर्चाको फरक अनुभूति त हुँदै होला, कस्तो फरक पाउनु भो त ?
युद्धमा त एकदमै सजिलो थियो । तर, संसदीय मोर्चामा निकै कठिन हुने रहेछ । युद्धमा हुँदा पनि मैले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ । तर, त्यतिबेला अहिलेको जस्तो चुनौती थिएन ।
युद्धमा हुँदा ध्वस्त गरिदिए पुग्थ्यो । बनेका संरचनामा एउटा बम प्रहार गरे पुगिहाल्थ्ये । ध्वंश गर्दा सफलता प्राप्त गरेको अनुभूति हुन्थ्यो ।
त्यसैलाई नै हामी सफलताका रूपमा गौरव गथ्र्यौं । तर, अहिले यो राजनीतिक र संसदीय मोर्चामा निकै चुनौती छ । त्यसमाथि मैले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएको छु ।
अब हामी भौतिक निर्माण र सामाजिक रूपान्तरणमा जुट्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न त्यति सहज छैन ।
प्रदेश ६ भौगोलिक रूपमा ठूलो र विकट छ । यहाँको भौतिक विकास र पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । निर्माण गर्न निकै कठिन छ। त्यसकारण पनि युद्ध मोर्चाभन्दा संसदीय र सत्ताको मोर्चामा नेतृत्व गर्न सहज छैन ।
समृद्धि भित्र के–के पर्छन् तपाईंको विचारमा ?
समृद्धि भनेको अभाव र गरिबीबाट मुक्ति हो । भोका र नांगा जनताको आयस्तरमा वृद्धि हुनु हो । पैदल हिँड्न बाध्य नागरिकलाई सवारी साधनमा यात्रा गराउन पाउने व्यवस्था हो ।
रोजगारीका लागि कालापहाड धाउनुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा दिलाउनु हो । हामीले भनेको समृद्ध प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला सदरमुकाम तत्काल राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछन् ।
हरेक बस्तीमा विद्युत् सेवा उपलब्ध हुनेछ । ‘एक गाउँपालिका एक घरेलु उद्योग’को अवधारणा अघि सारेका छौं । कोही पनि भोकै मर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनेछौं । समग्रमा हाम्रो प्रदेशका नागरिक अब अभाव, गरिबी, रोग र भोकबाट मुक्त हुनेछन् ।
यसका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं । भौगोलिक रुपमा कर्णाली प्रदेश विकट भएपनि पाँच वर्षमा विकास निमार्णले गति लिने छ । सबै ढुक्क हुनुहोस ।
मोडेल प्रदेश भनेको के हो ?
मोडेल शब्द आफैमा एक भरिपूण शब्द हो । तर शब्दमा मोडल भन्ने वित्तिकै गर्न निकै मुस्किल छ । कुनै एक नायिकन मोडेल बन्न उसको विगत देखि वर्तमान केलाउने हो । भने अवसरभन्दा चुनौती धेरै भेटिन्छ ।
हो, त्यस्तै छ । प्रदेश समृद्धिको कुरा । तपाईंको प्रश्नको जवाफ भनेको विकास पूर्वाधार सम्पन्न, आर्थिक, सामाजिक, पर्यटनदेखि प्रतिव्यक्ति आय धेरै भएको प्रदेश, उत्पादन धेरै हुने प्रदेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, संचार सडक लगायत आधारभुत आवश्यकता पूरा भएको गाउँ समाज, घर देश जिल्लालाई नै मोडेल भन्ने गरिन्छ ।
हो यिनै कुराको पूर्तिका लागि प्रदेश सरकारले विकास निमार्णलाई मुख्यप्रथामिकतामा खारखी आफ्नो योजना अघि सारेको तपाईंलाई जानकारी गराउँछु । तर अवसर भन्दा थुप्रै चुनौतीको सामाना गर्दै अघि बढ्ने छौँ ।
भौगोलिक हिसाबले विकट कर्णाली प्रदेशमा भन्ने बित्तिकै मोडल बनाउन सक्छु भन्नु गलत हो । तर पाँच वर्षमा जस्तासुकै चुनौतीको पनि सामाना गरी मोडल प्रदेश बनाउन्छौँ हामी । यो सरकारको अठोट पनि हो ।
पाँच वर्षमा कर्णालीको मुहार फेरिन्छ त ? कसरी नि ?
म आफैं पनि कर्णालीको बासिन्दा हुँ । कर्णालीको व्यथा र पीडा मलाई राम्रोसँग अनुभूति छ । यहाँ भएका समस्याका लागि प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । हुम्ला र डोल्पामा सडक पुर्याइनेछ ।
कर्णालीका नागरिकलाई स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कालापहाड जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्नेछौं । स्थानीयस्तरमै उच्च शिक्षाका लागि कार्यक्रम लागु गर्नेछौं ।
कर्णालीका नागरिकको आयस्तर वृद्धि गरी रोग र भोकबाट मुक्त गर्नेछौं । सहज रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन सरकारले कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ ।
चीनको उत्तरी दक्षिण नाका कहिलेसम्म खोल्नुहुन्छ ?
यो प्रदेश जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त भएको हो । संघर्षबाट स्थापना भएको प्रदेश भएकाले यहाँ धेरै चुनौती छन् । त्यसमध्ये हाम्रो प्रदेश दक्षिणी सीमा भारतसँग जोडिएको छैन ।
यो प्रदेशको एकमात्र विकल्प भनेको अब चीनसँग जोडिएका उत्तरी नाकाहरू हुन् । त्यसका लागि हामीले तत्काल उत्तरका नाका खोल्नैपर्ने बाध्यता छ ।
पहिलो क्याबिनेट बैठकले चीनसँग जोडिएका तीन वटा नाका खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । अबको दुई वर्षभित्र उत्तरका हुम्ला, डोल्पा र मुगुका तीन वटा नाका खुलिसक्नेछन् ।
यसका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नेछ । नेपालतर्फ भन्दा चीनबाट चाँडो काम हुने भएकाले नाका खोल्ने काम पनि चीनबाटै सुरु गर्नेछौं ।
नाका खुलेमा प्रदेशको बाहिरी देशसँग सम्बन्ध विस्तार हुनेछ । यहाँ उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गर्न पनि सहज हुनेछ ।
तर सरकार अहिले बजेट ल्याउने र नीति नियम बनाउने कार्यमा व्यस्त भएकाले नाका खुलाउने विषयमा धेरे समय दिन सकिएको छैन् । ढिलो चाडो चीनसंगको नाका खुलाउने हाम्रो प्रथामिकता हो ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा नमुना कसरी बन्छ त ?
हाम्रो प्रदेशलाई अन्य प्रदेशसँग तुलना गर्न मिल्दैन । र, भोलिका दिनमा पनि यो प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा नमुना नै बन्नेछ । यसको स्थापना पनि विशेष परिस्थितिबाट भएको हो ।
हामी यो प्रदेशलाई विल्कुलै नमुना बनाउनेछौं । यहाँका स्रोत साधनलाई अधिकतम परिचालन गर्नेछौं । अहिले मान्छेहरू श्रम गर्न लजाउँछन् । बेरोजगार भएर समय खेर फालिरहेका छन् ।
हामी श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नेछौं । जनतालाई काम गर्ने र आत्मनिर्भर बन्नेगरी उत्प्रेरणा प्रदान गर्नेछौं । त्यसका लागि हरेक महिनाको दुई दिनलाई हामी श्रम दिवसका रूपमा मनाउनेछौं ।
महिनाको दुई दिन मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सरकारी कर्मचारी र दलका नेताहरूलाई अनिवार्य श्रम गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछौं । यसले आम नागरिकलाई श्रम गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा मिल्नेछ ।
पाँच वर्षमा परिकल्पना गरेको प्रदेश कस्तो हो ?
हाम्रो कार्यकाल पाँच वर्षको हो । अबको पाँच वर्षपछि यो प्रदेशका सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएका हुनेछन । जिल्लाभित्र पनि सबै सडकहरू कालोपत्रे भइसक्नेछन् ।
चीनसँग जोडिएका तीन वटै नाका सञ्चालनमा आइसक्नेछन् । यो प्रदेश ग्रिन प्रदेशका रूपमा विकसित भएको हुनेछ । बस्तीहरू बिजुलीले झिलिमिली भएका हुनेछन् ।
जलविद्युत् र जडिबुटीसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन भइरहेका हुनेछन् । अधिकांश ठूला आयोजना र उद्योगले गति लिएको देख्न सकिनेछ । प्रदेश समृद्धिको गुरुयोजनाअनुसार विकास निर्माणका कामहरूको जग बसिसकेको हुनेछ ।
कर्णालीको परिभाषा समृद्धिसँग जोडिनेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासनमा हाम्रो प्रदेश अब्बल बनिसक्नेछ । समग्रमा पाँच वर्षपछि हाम्रो प्रदेश देशकै नमुना र आत्मनिर्भर भइसक्ने कल्पना गरेको छु ।
जनताका अपेक्षा पूरा होलान त ?
हामीबाट जनताले अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । ती अपेक्षा प्राथमिकताका आधारमा पूरा गर्नेछौं । आशा र विश्वास गरेर जनताले जिताएर पठाएका छन् ।
अपेक्षा गर्नु अनुचित होईन पक्कै पूरा हुने छ । जनताले अहिले नै आजै परिवर्तन वा उपलब्धि चाहेका छन् । तर, त्यो सम्भव छैन । हामी केही समयभित्र नै परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनेछौं ।
सरकारले वितरणमुखीभन्दा पनि उत्पादनमूलक कार्यक्रममा जोड दिनेछ । त्यसका लागि हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै नागरिकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनेछौं । सुशासन र सरकारी सेवालाई सरल र भरपर्दो बनाइनेछ ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुने भन्ने थियो त ?
यो बिलकुल गलत हल्ला हो । यस्तो कुनै सहमति भएको छैन । गठबन्धनभित्रको दल एमालेसँग सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गरेको भनेर बेकार हल्ला फैलाइएको छ ।
हामीले पदका लागि राजनीति गरेका होइनौं । मुख्यमन्त्रीकै लागि मैले मरिहत्ते गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन । मुख्यमन्त्री बन्नुअघि एमालेबाट आलोपालो नेतृत्वको प्रस्ताव आएकै हो ।
तर, हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका हौं । बाहिर आएको हल्लाजस्तो कुनै सहमति भएको छैन । सबै हल्ला निराधार हुन् । हामी मिलेरै अगाडि बढ्नेछौं । प्रदेशको समृद्धि हाम्रो साझा एजेण्डा हो ।
यो प्रदेशमा भौतिक निमार्णले कस्तो स्वरुप पाउला ?
पक्कै पनि भौतिक निमार्ण बिना विकास सम्भव छैन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, संचारका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकासले पहिलो प्रथामिकता पाउनेछ ।
कर्णाली हुँदै चीन जोड्ने सडक, अत्याधुनिक सेवासहित हरेक स्थानीय तहमा १५ शैया अस्पताल निमार्णका कुरा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले निकै ध्यानमा राखी काम गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
कार्यालय समयमा फेशबुक बन्दले केही चेन्ज ल्यायो त ?
यसमा तपाईं पत्रकारदेखि कोहीपनि नहतारिनु होस् । फेशबुक बन्दले पक्कै पनि चेन्ज ल्याउने छ । तर समय लाग्छ । कर्मचारीहरु बानी बस्दैछन् ।
तपाईंले हेर्नुभयो भने पनि अहिले १०–४ को सयममा फेशबुक चलाउन छाडेका छन् । यसले कामकाजमा पक्कै पनि सहजता ल्याउने छ । र अर्को कुरो सेवा ग्राहीहरुले भनेकै समयमा सेवा पाउने छन् । जसले गुनासाहरु धेरै सुन्नु पर्ने स्थिति आउदैन ।
कर्णाली प्रदेशमै नै फेशबुक बन्द हुन्छ भन्ने विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
मैले प्रदेशमा फेशबुक बन्द हुन्छ भनेकै होइन । कर्णाली प्रदेशमा रहेका एन्जीओका फेशबुक प्रचार रोक्ने अनि सरकारी कार्यालयमा १०–४ को सयममा चलाउनै नपाउने भन्ने हो ।
तर यहा मिडियाहरुले धेरै बंग्याएर लेखेपछि नानाथरी कुराहरु बाहिर आएका हुन् । तर स्ष्पट कुरो कर्णाली प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा १०–४ को सयममा पूर्ण फेशबुक बन्द नै भनेका छौँ ।
जिम्मेवारीका हिसाबले कोही मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद सामान्य नागरिक छौँ । पदीय हिसाबले मेरो जिम्मेवारी बढी छ । तर म एक्लैले चाहेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन पनि सम्भव छैन ।
हामीले एकताबद्ध भएर हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यो प्रदेशको समृद्धिका लागि मिलेर काम गरौं भन्ने मेरो सबैसँग आग्रह छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्रिने वातावरण निर्माण गरौं । सबैको सहकार्यबाट अबको केही वषभित्रै हाम्रो प्रदेश समृद्ध, आत्मनिर्भर र नमुना बन्नेछ । यसका शंका होइन, आशा गरौं ।
सागर परियार, कर्णाली प्रदेश ।
सोमबार, १९ चैत, ०७४